17 Ciyaartoy Oo Ka Mid Ahaa Dadkii Ku Tukanayey Masaajidkii New Zealand Ee Lagu Laayey Muslimiinta – Cadalool.com
17 Ciyaartoy Oo Ka Mid Ahaa Dadkii Ku Tukanayey Masaajidkii New Zealand Ee Lagu Laayey Muslimiinta
March 16, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Laba masaajid oo ku yaalla waddanka New Zealand ayaa shalay lagu qaaday weerarro argagixiso, waxaana ku dhintay in ka badan 49 qof oo Muslimiin Salaaddii Jimcaha ku tukanayey magaalada Christchurch, waxaana ku dhaawacmay dad tiradoodu kor u dhaaftay 40 ruux.
Masaajidka Badhtamaha magaalada ku yaalla ee Al Nour oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, waxa dadkii ku tukanayey ka mid ahaa 17 ciyaartoy oo muslimiin ah oo New Zealand u tegay inay kusoo ciyaaraan, balse bas ay saarnaayeen ayaa ku leexday masaajidka xilligii Salaadda ka hor intii aanay musiibadani dhicin.
Dawladda waddanka Bangladesh ayaa shaacisay in ciyaartooyada xulka qarankooda oo uu hor kacayey tababare Khaled Mashud ay halkaas ku sugnaayeen.
Ra’iisal wasaaraha New Zealand ayaa musiibadan ku tilmaantay maalin madow, waxaana hoos loo dhigay calanka waddanka.
Boqoradda waddanka Britain, ayaa iyaduna qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay garab taagan tahay New Zealand, waxaanay u dirtay kooxo ka caawiya baadhista iyo daaweynta dadka dhibaatadu soo gaadhay oo ay ku jiraan tahriibeyaal iyo dad kale oo kasoo jeeda Asia oo ku sugnaa waddankaas.
Ciyaartoyga Bangladesh oo ay tiradoodu ahayd 17 ayaa nasiib wanaag aanay waxba gaadhin, waxaana shilka kaddib loo qaaday hotelka ay degganaayeen oo masaajidka u dhawaa.
Inkasta oo ay dawladdu sheegtay in ciyaartoygeedu ay goobta joogeen, haddana tababare Mashud ayaa war uu soo saaray ku sheegay in 50 tallaabo ay u jireen halka dadka lagu toogtay.
“Waxaanu u jirnay 50 tallaabo masaajidka. Xaqiiqdii nasiib ayaanu lahayn. Haddii aanu saddex ama afar daqiiqadood aanu kasoo horreyn lahayn, gudaha masaajidka ayaanu ku jiri lahayn.” Sidaas waxa yidhi tababare Mashud.
“Si toos ah ayaanu u arkaynay muuqaalka dhacdada. Waxa aanu arkaynay dad dhiig baxaya oo masaajidka dibedda uga soo yaacaya. Markii aanu xaqiiqsanay in toogtuu uu khasaare badan noo geysan karayo haddii ay na arkaan, waxaanu galnay baska waxaananu dib ugu laabanay albaabkii aanu kasoo baxnay.” Ayuu ku daray.
Tababaruhu waxa uu si qiiro leh usoo bandhigay sidii arrintu u damaqday, waxaanu yidhi: “Nasiib-darro weeyaan inaanu goob-joog u ahaano binu-aadam arrintani ku dhacayso, waxaanay saamayn ku yeelanaysaa ciyaartayada.”